အန်တွိုင် ဂရစ်ဇ်မန်း . . . . ဘယ်လဲ ? ဘာလဲ ? — Sports Myanmar
အန်တွိုင် ဂရစ်ဇ်မန်း . . . . ဘယ်လဲ ? ဘာလဲ ?
နောက်ဆုံး မှာတော့ ဂရစ်ဇ်မန်း တစ်ယောက် အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် ကို စွန့်ခွာ ခဲ့ပါပြီ ။ ၂၀၁၄ ကတည်း က ရာသီတိုင်းလိုလို အသင်း ရဲ့ အဓိက ဂိုးသွင်းရှင် အဖြစ် ရပ်တည် ခဲ့ တဲ့ မက်ဒရစ် ရဲ့ အိမ်ရှေ့စံလေး ဟာ ၂၀၁၉ မှာတော့ အသင်းကို စွန့်ခွာ တော့မယ် လို့ အတိ အလင်း ကြေညာသွား ခဲ့ပြီ ပဲဖြစ် ပါတယ် ။ ဘာစီလိုနာ ကို ရောက်ဖို့ အလေးပေးခံ ထားရ ပေမယ့် အသင်းသစ် ကို တော့ အတည်ပြု ခြင်း မရှိသေး ပါဘူး ။
ဒါကြောင့် အန်တွိုင် ဂရစ်ဇ်မန်း ရောက်ရှိနိုင် ချေ ရှိတဲ့ ကလပ် အသင်း ၄ သင်း ကို ရောက်ရှိနိုင်ချေ အရ ထုတ်နှုတ် ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါတယ် ။
၁ ။ ဘာစီလိုနာ
အသင်း ကနေ ထွက်ပြီ ဆိုတာ နဲ့ အားလုံး ရဲ့ မျက်စိ ထဲမှာ ဘာစီလိုနာ ဂျာစီ ကို ကိုင်တော့မယ့် ဂရစ်ဇ်မန်း ကို ပြေးမြင်မိ ကြမှာ သေချာ ပါတယ် ။ တကယ်တန်း မှာလည်း ဂရစ်ဇ်မန်း ဟာ ဘာစီလိုနာ နဲ့ အလွန်နီးစပ် ခဲ့ဖူး ပြီး အေတီကို မက်ဒရစ် ရဲ့ အပြောင်း အရွှေ့ ပိတ်ခံရမှု ကြောင့် အသင်း အပေါ် သံယောဈဉ်မပျက် ဆက်ရှိ နေခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် အေတီကို မက်ဒရစ် ကနေ ထွက်လာမယ့် ဂရစ်ဇ်မန်း အတွက် ဘာစီလိုနာ ဟာ ရေပန်း အစားဆုံး ဖြစ်နေတာ အံ့အား သင့်စရာ မရှိ ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဂရစ်ဇ်မန်း ကို ခေါ်လိုက် တာ ဟာ ကော်တင်ဟို ရဲ့ နေရာ အတွက် ဆိုတာတော့ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ဂရစ်ဇ်မန်း က ဘယ်တောင်ပံ မှာ မကစားလို့ ပါပဲ ။
ဒါဆို ဂရစ်ဇ်မန်း ကို ဘာစီလိုနာ တို့ ဘာကြောင့် လိုအပ် မှာပါလဲ ။ ဆွာရက် ရဲ့ နေရာ ကို အစားထိုးဖို့ ပါ ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ ဂရစ်ဇ်မန်း ဟာ တစ်ရာသီ ဂိုး ၂၀ လောက် အာမခံ နိုင်တဲ့ ကစား သမားမျိုး ပါ ။ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ အထောင် တိုက်စစ်မှုး က အသက် အရွယ်ကြီးမြင့် လာပြီး အစားထိုးနိုင်မယ့် သူလည်း မရှိသေး ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ဂရစ်ဇ်မန်း သာ ဘာကာ ရောက်လာခဲ့ ရင် ဆွာရက် ရဲ့ နေရာ အတွက် ဖြစ်ဖို့ ကျိန်းသေ သလောက် ပါပဲ ။
၂ ။ PSG
ထိပ်တန်း ကစား သမားတိုင်း ကို ခေါ်ယူနိုင်စွမ်း ၊ လစာ ပေးချေ နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ ပြင်သစ် ချန်ပီယံ ရဲ့ ဓန အင်အား ကို မေ့ထား လို့ မရနိုင် ပါဘူး ။ ဘာပေ ၊ နေမာ တို့ လို အကောင်းဆုံး တွေ ရှိနေ ပေမယ့် PSG ရဲ့ လောဘ ကတော့ အတောသတ်နိုင် မှာ မဟုတ် ပါဘူး ။ UEFA ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းတွေ နဲ့ ငြိစွန်း မှု မရှိအောင် ကြိုးစား နေတယ် ဆိုပေမယ့် ဂရစ်ဇ်မန်း ကို ရ အောင် ခေါ်နိုင် စွမ်း ရှိတဲ့ အသင်း ဆိုတာ ကို တော့ ငြင်းလို့ မရနိုင် ပါဘူး ။
PSG မှာ ဆိုရင် ဂရစ်ဇ်မန်း ဟာ နောက်ချန် တိုက်စစ်မှုး ( သို့ ) ညာတောင်ပံ အဖြစ် နဲ့ ကစား ရနိုင် ပါတယ် ။ ဘယ်တောင်ပံ မှာ နေမာ ရှိ နေပြီး ဘာပေ ကတော့ လာမယ့် ရာသီ က စပြီး ကာဗာနီ ရဲ့ အထောင် တိုက်စစ် မှုး တာဝန် ကို ယူဖို့ သေချာ သလောက် ရှိနေ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဂရစ်ဇ်မန်း သာ ပြင်သစ် မြို့တော် ကို ရောက်ခဲ့ မယ် ဆိုရင် ညာ တောင်ပံ ( သို့ ) ကွင်းလယ် တိုက်စစ် မှာ နေရာ ရမှာပါ ။
ဘယ်သူ က ဒီ အပြောင်းအရွှေ့ ကို မဖြစ်လာဘူးလို့ ငြင်းနိုင် မှာလဲ . . . ဂရစ်ဇ်မန်း ဟာ ပြင်သစ်သားပါ ။
France’s forward Antoine Griezmann (R) celebrates after scoring the 4-0 goal with France’s forward Kylian Mbappe during the UEFA Euro 2020 Group H qualification football match between France and Iceland at the Stade de France stadium in Saint-Denis, north of Paris, on March 25, 2019. – The match ended 4-0 for France. (Photo by Martin BUREAU / AFP)
၃ ။ မန်ချက်စတာ စီးတီး
ဘာစီလိုနာ ၊ PSG တို့ လောက် ရေပန်း မစားပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ကလည်း ဂရစ်ဇ်မန်း ကို မျက်စိ ကျလာ နိုင် ပါတယ် ။ ဆာဂျီယို အဂွေရို ဟာ ဂိုးတွေ သွင်းပေး နေ ပေမယ့် အသက် အရွယ် က နေ၀င် ချိန် ကို စတင် ချဉ်းကပ် နေပါပြီ ။
စာချုပ် ပြည့်ချိန် မှာ အစ်တီဟတ် ကို စွန့်ခွာပြီး ဇာတိ ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားတဲ့ အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှုးကြီး ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေ ကို ဂရစ်ဇ်မန်း က အာမခံ ပေးနိုင် ပါတယ် ။ စီးတီး ကစားကွက် နဲ့ လည်း ကိုက်ညီ ပါတယ် ။ ဂရစ်ဇ်မန်း ရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ကြေး ၊ လုပ်ခ လစာတွေ ကိုလည်း ပေးချေ နိုင် ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပက် ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ အသင်း ကို ဂရစ်ဇ်မန်း ရောက်လာ နိုင်ချေ ကိုလည်း ထည့်တွက် သင့် ပါတယ် ။
၄ ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
ဒါကတော့ တော်တော်လေး ရူးသွပ် မိုက်မဲတဲ့ စဉ်းစားမှု တစ်ခု ဆိုပေမယ့် ရှေ့ က ၃ သင်း မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ဂရစ်ဇ်မန်း ရောက်လာ နိုင်ချေ အများဆုံး ရှိတဲ့ အသင်း ဖြစ်လာ နိုင် ပါတယ် ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူ က ဒေးဗစ် ဘက်ခမ်း နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ အမာခံ ပရိသတ် ဖြစ်နေလို့ ပါ ။
France’s midfielder Paul Pogba (L) jokes with France’s forward Antoine Griezmann duringatraining session in Clairefontaine-en-Yvelines on March 19, 2019, as part of the team’s preparation for their upcoming Euro 2020 qualification football matches against Moldova and Iceland. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
ပေါလ် ပေါ့ဘာ နဲ့ အလွန် ရင်းနှီး တာ ၊ အသင်း မှာ ပထမဦးစားပေး အဖြစ် ကစားရ ဖို့ သေချာ နေတာ ၊ သူ တစ်ချိန် က အလွန် အမင်း နှစ်သက် ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ရဲ့ နံပါတ် ၇ ဂျာစီ ( ဆန်းချက် ထွက်ခွာ ဖို့ သေချာ သလောက် ရှိနေ ) ကို ၀တ်ဆင် ဖို့ အခွင့် အရေး ရှိနေတာ တွေ က ဂရစ်ဇ်မန်း ကို သရဲနီ တစ်ယောက် အဖြစ် မြင်တွေ့ ရဖို့ အခွင့်အလမ်း တွေ ဖြစ်လာ စေနိုင် ပါတယ် ။ အလွန့်အလွန် နည်းပါးတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပေမယ့် အထက် က ၃ သင်း မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်တော့ ထည့်တွက် ရတော့ မှာပါ ။ ယူရိုပါလိဂ် ကစားချင် ၊ မကစားချင် ဆိုတာတော့ ကာယကံ ရှင် သာ အသိဆုံး ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ် ။
SM ရဲ့ သုံးသပ်မှု ကတော့ – ဘာစီလိုနာ ဟာ ဂရစ်ဇ်မန်း ရောက်ဖို့ အလားအလာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး အံ့အားသင့်ဖွယ် ပြောင်းရွှေ့မှု အဖြစ် မန်စီးတိး ကို အလေးပေး လိုပါတယ် ။
ပရိသတ်ကြီးတို့ ကရော ဂရစ်ဇ်မန်း ဘယ် ကို ရောက်မယ် လို့ ထင်သလဲဗျာ . . . . .
အနျတှိုငျ ဂရဈဇျမနျး . . . . ဘယျလဲ ? ဘာလဲ ?
နောကျဆုံး မှာတော့ ဂရဈဇျမနျး တဈယောကျ အသကျလကျတီကို မကျဒရဈ ကို စှနျ့ခှာ ခဲ့ပါပွီ ။ ၂၀၁၄ ကတညျး က ရာသီတိုငျးလိုလို အသငျး ရဲ့ အဓိက ဂိုးသှငျးရှငျ အဖွဈ ရပျတညျ ခဲ့ တဲ့ မကျဒရဈ ရဲ့ အိမျရှစေံ့လေး ဟာ ၂၀၁၉ မှာတော့ အသငျးကို စှနျ့ခှာ တော့မယျ လို့ အတိ အလငျး ကွညောသှား ခဲ့ပွီ ပဲဖွဈ ပါတယျ ။ ဘာစီလိုနာ ကို ရောကျဖို့ အလေးပေးခံ ထားရ ပမေယျ့ အသငျးသဈ ကို တော့ အတညျပွု ခွငျး မရှိသေး ပါဘူး ။
ဒါကွောငျ့ အနျတှိုငျ ဂရဈဇျမနျး ရောကျရှိနိုငျ ခြေ ရှိတဲ့ ကလပျ အသငျး ၄ သငျး ကို ရောကျရှိနိုငျခြေ အရ ထုတျနှုတျ ဖျောပွ လိုကျရ ပါတယျ ။
၁ ။ ဘာစီလိုနာ
အသငျး ကနေ ထှကျပွီ ဆိုတာ နဲ့ အားလုံး ရဲ့ မကျြစိ ထဲမှာ ဘာစီလိုနာ ဂြာစီ ကို ကိုငျတော့မယျ့ ဂရဈဇျမနျး ကို ပွေးမွငျမိ ကွမှာ သခြော ပါတယျ ။ တကယျတနျး မှာလညျး ဂရဈဇျမနျး ဟာ ဘာစီလိုနာ နဲ့ အလှနျနီးစပျ ခဲ့ဖူး ပွီး အတေီကို မကျဒရဈ ရဲ့ အပွောငျး အရှေ့ ပိတျခံရမှု ကွောငျ့ အသငျး အပျေါ သံယောစဉျြမပကျြ ဆကျရှိ နခေဲ့တာ ဖွဈ ပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ အတေီကို မကျဒရဈ ကနေ ထှကျလာမယျ့ ဂရဈဇျမနျး အတှကျ ဘာစီလိုနာ ဟာ ရပေနျး အစားဆုံး ဖွဈနတော အံ့အား သငျ့စရာ မရှိ ပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ ဂရဈဇျမနျး ကို ချေါလိုကျ တာ ဟာ ကျောတငျဟို ရဲ့ နရော အတှကျ ဆိုတာတော့ လုံးဝ မဟုတျပါဘူး ။ ဘာကွောငျ့လညျး ဆိုတော့ ဂရဈဇျမနျး က ဘယျတောငျပံ မှာ မကစားလို့ ပါပဲ ။
ဒါဆို ဂရဈဇျမနျး ကို ဘာစီလိုနာ တို့ ဘာကွောငျ့ လိုအပျ မှာပါလဲ ။ ဆှာရကျ ရဲ့ နရော ကို အစားထိုးဖို့ ပါ ။ ဟုတျပါတယျ ။ ဂရဈဇျမနျး ဟာ တဈရာသီ ဂိုး ၂၀ လောကျ အာမခံ နိုငျတဲ့ ကစား သမားမြိုး ပါ ။ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ အထောငျ တိုကျစဈမှုး က အသကျ အရှယျကွီးမွငျ့ လာပွီး အစားထိုးနိုငျမယျ့ သူလညျး မရှိသေး ပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့ ဂရဈဇျမနျး သာ ဘာကာ ရောကျလာခဲ့ ရငျ ဆှာရကျ ရဲ့ နရော အတှကျ ဖွဈဖို့ ကြိနျးသေ သလောကျ ပါပဲ ။
ထိပျတနျး ကစား သမားတိုငျး ကို ချေါယူနိုငျစှမျး ၊ လစာ ပေးခြေ နိုငျစှမျး ရှိတဲ့ ပွငျသဈ ခနျြပီယံ ရဲ့ ဓန အငျအား ကို မထေ့ား လို့ မရနိုငျ ပါဘူး ။ ဘာပေ ၊ နမော တို့ လို အကောငျးဆုံး တှေ ရှိနေ ပမေယျ့ PSG ရဲ့ လောဘ ကတော့ အတောသတျနိုငျ မှာ မဟုတျ ပါဘူး ။ UEFA ရဲ့ ဘဏ်ဍာရေး စညျးမဉျြးတှေ နဲ့ ငွိစှနျး မှု မရှိအောငျ ကွိုးစား နတေယျ ဆိုပမေယျ့ ဂရဈဇျမနျး ကို ရ အောငျ ချေါနိုငျ စှမျး ရှိတဲ့ အသငျး ဆိုတာ ကို တော့ ငွငျးလို့ မရနိုငျ ပါဘူး ။
PSG မှာ ဆိုရငျ ဂရဈဇျမနျး ဟာ နောကျခနျြ တိုကျစဈမှုး ( သို့ ) ညာတောငျပံ အဖွဈ နဲ့ ကစား ရနိုငျ ပါတယျ ။ ဘယျတောငျပံ မှာ နမော ရှိ နပွေီး ဘာပေ ကတော့ လာမယျ့ ရာသီ က စပွီး ကာဗာနီ ရဲ့ အထောငျ တိုကျစဈ မှုး တာဝနျ ကို ယူဖို့ သခြော သလောကျ ရှိနေ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ဂရဈဇျမနျး သာ ပွငျသဈ မွို့တျော ကို ရောကျခဲ့ မယျ ဆိုရငျ ညာ တောငျပံ ( သို့ ) ကှငျးလယျ တိုကျစဈ မှာ နရော ရမှာပါ ။
ဘယျသူ က ဒီ အပွောငျးအရှေ့ ကို မဖွဈလာဘူးလို့ ငွငျးနိုငျ မှာလဲ . . . ဂရဈဇျမနျး ဟာ ပွငျသဈသားပါ ။
ဘာစီလိုနာ ၊ PSG တို့ လောကျ ရပေနျး မစားပမေယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံ ကလညျး ဂရဈဇျမနျး ကို မကျြစိ ကလြာ နိုငျ ပါတယျ ။ ဆာဂြီယို အဂှရေို ဟာ ဂိုးတှေ သှငျးပေး နေ ပမေယျ့ အသကျ အရှယျ က နဝေငျ ခြိနျ ကို စတငျ ခဉျြးကပျ နပေါပွီ ။
စာခြုပျ ပွညျ့ခြိနျ မှာ အဈတီဟတျ ကို စှနျ့ခှာပွီး ဇာတိ ပွနျဖို့ ဆုံးဖွတျ ထားတဲ့ အာဂငျြတီးနား တိုကျစဈမှုးကွီး ရဲ့ သှငျးဂိုးတှေ ကို ဂရဈဇျမနျး က အာမခံ ပေးနိုငျ ပါတယျ ။ စီးတီး ကစားကှကျ နဲ့ လညျး ကိုကျညီ ပါတယျ ။ ဂရဈဇျမနျး ရဲ့ ပွောငျးရှေ့ ကွေး ၊ လုပျခ လစာတှေ ကိုလညျး ပေးခြေ နိုငျ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ပကျ ဂှာဒီယိုလာ ရဲ့ အသငျး ကို ဂရဈဇျမနျး ရောကျလာ နိုငျခြေ ကိုလညျး ထညျ့တှကျ သငျ့ ပါတယျ ။
၄ ။ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ
ဒါကတော့ တျောတျောလေး ရူးသှပျ မိုကျမဲတဲ့ စဉျးစားမှု တဈခု ဆိုပမေယျ့ ရှေ့ က ၃ သငျး မဟုတျဘူး ဆိုရငျတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ဟာ ဂရဈဇျမနျး ရောကျလာ နိုငျခြေ အမြားဆုံး ရှိတဲ့ အသငျး ဖွဈလာ နိုငျ ပါတယျ ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ သူ က ဒေးဗဈ ဘကျခမျး နဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ အမာခံ ပရိသတျ ဖွဈနလေို့ ပါ ။
ပေါလျ ပေါ့ဘာ နဲ့ အလှနျ ရငျးနှီး တာ ၊ အသငျး မှာ ပထမဦးစားပေး အဖွဈ ကစားရ ဖို့ သခြော နတော ၊ သူ တဈခြိနျ က အလှနျ အမငျး နှဈသကျ ခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ နံပါတျ ရ ဂြာစီ ( ဆနျးခကျြ ထှကျခှာ ဖို့ သခြော သလောကျ ရှိနေ ) ကို ၀တျဆငျ ဖို့ အခှငျ့ အရေး ရှိနတော တှေ က ဂရဈဇျမနျး ကို သရဲနီ တဈယောကျ အဖွဈ မွငျတှေ့ ရဖို့ အခှငျ့အလမျး တှေ ဖွဈလာ စနေိုငျ ပါတယျ ။ အလှနျ့အလှနျ နညျးပါးတဲ့ ရာခိုငျနှုနျး ဖွဈပမေယျ့ အထကျ က ၃ သငျး မဟုတျဘူး ဆိုရငျတော့ ထညျ့တှကျ ရတော့ မှာပါ ။ ယူရိုပါလိဂျ ကစားခငျြ ၊ မကစားခငျြ ဆိုတာတော့ ကာယကံ ရှငျ သာ အသိဆုံး ဖွဈပါ လိမျ့မယျ ။
SM ရဲ့ သုံးသပျမှု ကတော့ – ဘာစီလိုနာ ဟာ ဂရဈဇျမနျး ရောကျဖို့ အလားအလာ အကောငျးဆုံး ဖွဈပွီး အံ့အားသငျ့ဖှယျ ပွောငျးရှမှေု့ အဖွဈ မနျစီးတိး ကို အလေးပေး လိုပါတယျ ။
ပရိသတျကွီးတို့ ကရော ဂရဈဇျမနျး ဘယျ ကို ရောကျမယျ လို့ ထငျသလဲဗြာ . . . . .